Arzantina:Nolavin’ny loholona ny fampiakarana ny haba amin’ny fanondranana ny vokatry ny fambolena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2008 2:04 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, Français, 繁體中文, 简体中文, English
Ny 17 jolay 2008 teo dia nolavin’ny Antenimieran-doholona Arzantina ny volavolan-dalàna natolotry ny Filoha Cristina Fernández de Kirchner mba hampiakarana ny haba alaina amin’ny fanondranana ny vokatry ny fambolena.
Ny blaogy Viva el Campo [amin’ny teny espagñola] dia nankalaza ity fanapahan-kevitra ity tamin’ny kiaka hoe “Ho ela velona anie ny tanindrazana”, ary mitatitra ny fotoana tao amin’ny Antenimieran’doholona izay nitsipaka ity volavolan-dalàna ity.
I Paro Agropecuario [amin’ny teny espagñola] dia mandefa antso ho fanangànana firenena mendrika iray, ary maniry ny mba hamitàn-dramatoa Filoha ny fe-potoam-piasana nahalàny azy – na dia avy amin’ny fanoherana aza ny tenany -, valin-teni-na tia tanindrazana ho setrin’ireo fiampangàna fikotrehana “fanonganam-panjakana” voizin’ireo mpomba ny governemanta rehefa miresaka ny mpanao fihetsiketsehana mitsipaka ity fanavaozana ity.
I Ciudadanos Participando [amin’ny teny espagñola] dia nanoratra hoe “Nahazo ny anjara Waterloo-ny i Kirchner ”.
Mendieta el Renegau [amin’ny teny espagñola], mankasitraka ny fisiam-pomba fijery maro ao anatin’ny antokon’ny maro an’isa, dia mangataka ny mba handraisana amin’ny fo tony ilay fanapahan-kevitr’i Julio Cobos [izay tsy mba péroniste, toa an-dramatoa Filoha, fa tena mpiara-mitolona ilaina tokoa], ary tsy miala ao anaty Governemanta.
I Homo Economicus [amin’ny teny espagñola] dia manontany tena ny amin’izay ho fiantraikan’ity fanajanoana ny volavolan’ny governemanta ity eo amin’ny lafiny toekarena, indrindra indrindra eo amin’ny vidin-tsakafo [be tombom-barotra, ny fambolena soza ka nàka ny toeran’ny fambolena vokatra fihinana hafa].
Ny Blog del Ingeniero [amin’ny teny espagñola] dia mihevitra fa raha ny zava-misy marina dia samy voa ny rehetra ao anatin’ity fifandirana lava efa ho efa-bolana ity. Ao amin’ny Arte Política [amin’ny teny espagñola], mpikambana iray no nandefa antso ao anatin’ny hàfany ny mba handranitan’ireo mpandray anjara (hanompàna) an’i “Cleto” (Julio Cobos) : na dia teo aza ny lohateniny feno fandranitana (”Pejy iray ho fanompàna an’i Cleto”), ity hafatra ity dia toerana iray iadian-kevitra momba ny anjara noraisin’i Cobos tamin’ny tsy fampandaniana ilay volavolan’ny fitondrana.
Ny gazety La Nación dia manana takelaka amin’ny Aterineto mitondra ny lohateny “Soy Corresponsal “, ka ireo mpamaky azy dia afaka mametraka lahatsoratra sy sary ao: ny fifidianana nataon’ny Antenimieran-doholona no mitàna toerana betsaka ao, isan’andro vaky.
Tsy dia misy ambara firy ireo blaogy amin’ny fiteny anglisy, nefa na izany aza dia misy azo vakiana momba azy ity ihany ao amin’ny Understanding Argentina; By The Fault sy Open Democracy.
Muy bueno tu sitio, cuando estes muuuuy aburrido pasate por el mio, saludos!
21 Aogositra 2008, 19:36
Tena tsy haiko ilay teny fa dia misaotra an’i Luis na izany aza. Raha mba misy afaka manampya ahy handika azy io ho amin’ny teny Malagasy koa dia isaorako mialoha
31 Aogositra 2008, 04:05